ဖိုရမ် ၀က်ဆိုက် တစ်ခု — MYSTERY ZILLION
ဖိုရမ် ၀က်ဆိုက် တစ်ခု
February 2009 edited July 2010 in Dreamweaver
Dreamwaver ကိုသုံးပြီး website ဖန် ရာမှာ forum တွေဘယ်လိုထည့်ရသလဲ
ဖိုရမ် ၀က်ဆိုက် တစ်ခု လုပ်ချင်တာ ကူညီပါ(ကျူးမီးငါး):65::65:
ဖိုရမ်ဝက်ဆိုက်တစ်ခု ခုမှစရေးမယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်ကြာသွားမယ်ဗျ။ အသင့်ရေးပြီးသားလေးတွေကို သုံးပါလား။ PhpBB တို့လို၊ vbulletin တို့လို အလကားရတာလေးတွေရှိတာဘဲ။ အလကားပေးတာတွေ တကယ်တော့ အများကြီင်္းရှိပါတယ်လေ။ လေ့လာကြည့်ပါလား။
လိပ်စာလေးပေးပါလား အလကားဆို ကြိုက်ကြိုက်
phpbb အတွက်ဆိုရင် ဒီမှာပါ။
vBulletin အတွက်ဆိုရင် ဒီမှာပါ။
mkportal က fourm တွေနဲ့ တွဲသုံးတာမဟုတ်ဘူးလား... Free forum ထဲမှာ SMF အကြိုက်ဆုံးပဲဗျ..
You need to purchase vBulletin license. Ah the only way to get it free is to use cracked version.
@topicstarter, phpBB and SMF are highly recommended, and above all, ZERO cost.
phbb ကိုဒေါင်းပြီးသွားပါပြီ ၇လည်း၇ပါတယ်ဖိုင်အလွတ်တွေပဲတွေ့၇တယ်ဗျ အဲဒီထဲကိုေ၇းထည့်ရမှာလား
နားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါကို dreamwaver နဲ့ဘယ်လိုတွဲရတာလဲနားမလည် ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ အဲ ဒါကိုဘာဆက်လုပ်၇မှန်းမသိဘူး ဗျာထိုင်ကြည့်နေတာပဲ
ဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲမသိဘူး ခင်ဗျာရှင်းပြပေးပါဦးဗျာ
phpbb က dreamweaver နဲ့ တွဲရမှာ မဟုတ်ဘူးလေ... သူက wordpress လိုမျိုး install လုပ်ပြီး သုံးရတာပဲဗျ။
သူက Dreamweaver နဲ့တွဲသုံးရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သီးခြားသုံးရတဲ့ကောင်ပါ။ပြောရရင် Wordpress တို့လိုမျိုးပေါ့
သူ့ကိုစမ်းသုံးဖို့ဆို အရင် localhost မှာစမ်းပြီးအင်စတောလုပ်သုံးကြည့်ပါ။အင်စတောရတာလည်း လွယ်ပါတယ်။ လုပ်နည်းတွေလည်းရေးထားပါတယ်။ပြီးတော့မှ အွန်လိုင်းမှာသုံးမယ်ဆို သူ့ပဲသီးသန့်ဖိုရမ်အဇြစ် သုံးလို့ရသလို ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ site မှာလည်း လင့်တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးမှသုံးလည်းရပါတယ်။သူ့မှာ themes တွေ စသဖြင့်ရှိပါတယ် ရှာဖွေဒေါင်းပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။အဆင်ပြေမှာပါ။
xampp , wamp တို ့လို့apache server တစ်ခုကိုတင်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီထဲမှာ readme file ပါတက်ပါတယ်
ဟုတ်ကျျွန်တော်စမ်းတာ အဆင်မပြေတာလေးတစ်ခုလောက်ပြောပြပါဦးကျွန်တော်ကတုံးတယ်ဗျာ ဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်ဗျာ